Abanye abadlali abadumileyo baseMorocco | Ukuhamba kwe-Absolut
Umfanekiso | As.com
Umboniso bhanyabhanya waseMorocco ngumzi mveliso omkhulu eAfrika onesiphiwo esikhulu sokubalisa amabali anomdla, ahambayo nahlukile. Abadlali bayo baphakathi kweyona mpumelelo kwilizwekazi kwaye uninzi lwabo luthathe isigqibo sokuya e-Europe bekhangela iiprojekthi ezintsha zokwandisa imisebenzi yabo nokwaziwa kwilizwe liphela.
Kweli nqaku siza kuthetha ngomkhondo weendlela ezininzi Abadlali abadumileyo baseMorocco, bempumelelo enkulu kunye nekamva kwishishini lokwenziwa kweefilim ngokuqinisekileyo sele uyazi ngokubabona kwininzi yemiboniso bhanyabhanya, umabonwakude kunye nemidlalo yeqonga. Ukuba uyayithanda i-cinema kunye nenkqubo yayo yeenkwenkwezi, ungaphoswa!
2 UAdil koukouh
3 UNasser saleh
4 UGadi Elmaleh
Wazalelwa e-1993 eMadrid kodwa uvela kusapho olunemvelaphi yaseMorocco. Kuba wayemncinci kakhulu, uMina El Hammani (oneminyaka engama-27 ubudala) wayesoloko esazi ukuba ufuna ukuzinikezela kwihlabathi lokudlala. Ukusuka kubazali bakhe wafunda inkcubeko yomzamo wokufezekisa amaphupha akhe, ke waqala ukusebenza eneminyaka eli-16 kwivenkile yokutyela ekhawulezileyo kananjalo njengomngenisi ePalacio de los Deportes eMadrid ukuhlawulela izifundo zakhe emhlabeni. zemidlalo yeqonga.
Nangona ebekwinqanaba amatyeli aliqela ngo "Ngaphakathi komhlaba" ngu Paco Becerra (2017) okanye enze umdlalo ofundwayo ka 'De mujeres sobre mujeres' kwi-Ellas Crean Festival (2016), ngokusekwe kwizicatshulwa ezivela kubabhali bemidlalo eyahlukeneyo enje UDakota Suárez, uSara García, uLaila Ripoll, uYolanda Dorado noJuana Escabias.
Nangona kunjalo, U-Mina El Hammani waba ngumntu oqhelekileyo kuluntu jikelele ukusuka ekubonakaleni kwakhe okokuqala kumabonwakude kolu thotho «Centro Médico». Emva koko kwafika ukulahlwa kwakhe okokuqala kuthotho lweTelecinco oluyimpumelelo "El Príncipe" (2014) apho wanika uNur ubomi kwisizini yesibini, owayekhuselekile uFatima (Hiba Abouk) owayethandwa kakhulu nguMina njengesalathiso kwihlabathi lezobugcisa kunye nokwenza icon yeenkcubeko ezininzi.
Ukudityaniswa kwakhe kwiscreen esincinci kwafika ngo-2017 xa wafumana indawo yakhe yokuqala ekhokelayo kuthotho lwe- «Servir y Protecte» (2017) njengoSalima kwelinye lamacebo kaPepa Aniorte.
Uthotho apho uMina El Hammani afezekisa khona udumo yayingu "Elite" (2018) apho adlala khona uNadia, Umfundi onesifundi ongena kwesi sikolo sikumgangatho ophezulu ngelixa esekhaya ehlala imfundo engqongqo yamaSilamsi ayifundiswe ngabazali bakhe, abaqhuba ishishini eliphantsi. Kweli bali, iarc yomlinganiswa yenye yezona zityebileyo ngenxa yongquzulwano olwenziwa zihlabathi zombini.
Emva kokudlula "kwi-Elite", umdlali weqonga waseMorocco uza kuthatha inxaxheba kwi "El Internado: Las Cumbres" (2021) kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon kwaye ikhutshwe njengomfanekiso wohlobo lweGuerlain. Umdlali weqonga onemvelaphi yaseMorocco uthetha isiArabhu, isiNgesi nesiSpanish.
Umfanekiso | Imithombo yeendaba ye-Europa
UAdil Koukouh (oneminyaka engama-25 ubudala) wazalelwa eTetouan ngo-1995. Ekunye nosapho lwakhe bafudukela eMadrid apho ahlala khona ukusukela kwiminyaka eli-9 ubudala. Umfana wayefuna ukuba ngumzekelo kodwa kwisikolo sikaJavier Manrique, iA Pie de Calle, babona amandla akhe phambi kwekhamera kwaye bamqinisekisa ukuba ukwenza into yinto yakhe. Ubakhathalele kwaye wagqibela ngokufunda i-Dramatic Art, eyamkhokelela ekubeni abe ngumdlali wezityhilelo kunye nesithembiso sokutolika eSpain.
Uninzi lwabadlali abancinci baqala ukuthatha amanyathelo abo kwiscreen esincinci ukuze batsibe kwi-cinema kamva. Kukwimeko ka-Adil Koukouh othathe amanyathelo akhe okuqala ekusebenziseni ixesha lokuqala kuthotho "I-B & B: de Boca en boca" (2014), apho abadlali abanjengoBelén Rueda, uMacarena García, uFran Perea okanye uAndrés Velencoso bathathe inxaxheba.
Uye wathatha inxaxheba kuthotho lweTelecinco "El Príncipe" (2014), eyaphula iirekhodi zabaphulaphuli kwisizini yayo yokuqala. Apho wayedlala uDriss, inkwenkwe yaseMorocco eyayiphupha ngokuba ngumdlali webhola. Kolu ngcelele, wabelana ngebhili ngeenkwenkwezi ezinje ngoRubén Cortada, uAlex González, uHiba Abouk, uJosé Coronado, uThaïs Blume okanye uElia Galera.
Kumabonwakude, kutshanje ebeyinxalenye yoluhlu olunjenge «Vis a vis» (2015) nguAntena 3, «El Cid» (2019) yiAmazon Prime Video okanye iEntrevías (2021) nguMediaset Spain.
U-Adil Koukouh uthathe inxaxheba kwi-cinema, ngakumbi njengomlingisi ophambili kwifilimu "A ngasese" (2014) eyalelwa kwaye yabhalwa nguMikel Rueda weeFilimu zeVertigo. Ifilimu eboniswe okokuqala kwiMalaga Film Festival. Kuyo, lo mdlali mncinci waseMorocco uzibeka ezicathulweni zika-Ibrahim, inkwenkwe ehlala ibali lothando kunye nenye inkwenkwe egama linguRafa. Ngaphandle kwamathandabuzo, yindima entsonkothileyo kwi-rookie ekufuneka ithwale ubunzima bendima ephambili kwifilimu. Ukhatshwa yifilimu ngabalingisi beGermán Alcarazu, u-Anglex Angulo noAna Wagener.
Ngaphandle kobutsha bakhe, uye waya kwinqanaba lokuthatha inxaxheba kumdlalo "URashid noGabriel" (2019), nguGabi Ochoa njengomlingisi ophambili.
Umfanekiso | Antena3.com
UNasser Saleh (oneminyaka engama-28 ubudala) ngumdlali weqonga waseSpain osuka eMoroccan osele esemncinci usebenze kwezinye zeemveliso eziyimpumelelo zeentsomi zaseSpain. Waqala umsebenzi wakhe kumabonwakude kuthotho "HKM" (2008) nguCuatro enika ubomi kuMoha kwaye kamva wadlula kwi- "La pecera de Eva" (2010) kunye no-Alexandra Jiménez badlala uLeo. Nangona kunjalo, kwade kwaba lilungu leqela labadlali be "Fiziksi okanye iKhemistry" apho waduma kakhulu.
Ngo-2008, i- "Física o Química" yaboniswa kwi-Antena 3, enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kulutsha olufikisayo kule minyaka idlulileyo kwilizwe lethu. Intsomi yayiyinkwali yabadlali abaninzi abancinci abanjengoNasser Saleh, owathi kwisizini yesihlanu wadlala umRoma oselula waseMorocco owamkelwa ngomnye wootitshala baseZurbarán.
Emva kolu luhlu lolutsha waqalisa ezinye iiprojekthi ezinje nge "Imperium" (2012) apho wayedlala khona uCrasso (ikhoboka kusapho lakwaSulpice), "iToledo: ukuwela ikamva" (2012) (apho wayenendima ka-Abdul) okanye "INkosana" (2014). Ubuye wavela kwi «Tiempos de guerra» (2017), enye imveliso yeAntena 3 kumabonakude.
Ukongeza ekusebenzeni kumabonwakude, ikhondo lomsebenzi wakhe likhule ngendima zefilimu kwiifilimu eziphambili ezinje nge "Biutiful" (2010) Ekhokelwa ngu-Alejandro González Iñárritu kunye no-Javier Bardem okanye "Akusayi kubakho luxolo kwabangendawo" (2011) eyalelwe ngu-Enrique Urbizu nalapho wabelana khona ngescreen noJosé Coronado.
Umfanekiso | INetflix.com
​UGad Elmaleh (iminyaka eyi-49) ngumdlali weqonga waseMorocco kunye nomhlekisi ozelwe eCasablanca onwabele impumelelo enkulu eFrance. Isipho sokutolika sihamba ngemithambo yakhe kuba utata wakhe wayengumlingisi. Ngo-1988 wasuka eMorocco waya eCanada, apho ahlala khona iminyaka emine. Apho wafunda isayensi yezopolitiko, wasebenza kunomathotholo, kwaye wabhala uninzi lweemonologues awayezenza kwiiklabhu eMontreal.
Kwiminyaka eyalandelayo, lo mdlali waseMorocco waya eParis apho wayethatha ikhosi yeLe Cours Florent wabhala umboniso obizwa ngokuba yi 'Décalages' owawubalisa lukhulu ngamava akhe eMontreal naseParis ngo-1996. 'La Fri Normale'.
UGad Elmaleh waba liqhula elihloniphekileyo kodwa ukwangumdlali weqonga obalaseleyo owayedlala iifilimu ezininzi zaseFrance ezinje nge "The Game of Idiots" (2006), "Inkohliso eNtofontofo" (2006), okanye "ezinzulwini zobusuku eParis" (2011). Uye wenza amanyathelo akhe okuqala njengombhali wesikrini nanjengomlawuli. Ukongeza, ungowemvelaphi yamaJuda kwaye angathetha iilwimi ezininzi kubandakanya isiArabhu, isiFrentshi kunye nesiHebhere.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Abanye abadlali abadumileyo baseMorocco